R/wasaare ku xigeenka Turkiga oo deeq raashin ah ku wareejiyay guddiga Qaran ee gurmadka abaaraha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/wasaare ku xigeenka Turkiga oo deeq raashin ah ku wareejiyay guddiga Qaran...
R/wasaare ku xigeenka Turkiga oo deeq raashin ah ku wareejiyay guddiga Qaran ee gurmadka abaaraha
R/wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Vaysi Kaynak oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa deeq raashin oo lagu talagalay dadka ku tabaaloobay abaaraha ku wareejiyay guddiga Qaran ee gurmadka abaaraha.
Deeqdan oo saarneyd 6 gaari oo nooca xamuulka ah waxaa dowladda Turkiga ugu tala gashay 12-kun oo qoys inay ku noolaadaan muddo bil ah.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ayaa u mahad celiyay Turkiga waxa uuna sheegay in dowladda Turkiga ay wax badan oo dhinaca bini’aadamada u qabteen ummadda Soomaaliyeed.
“Markuu uu yimid madaxweynaha Turkiga Erdugan iyo qoyskiisa wax badan ayay Soomaaliya u qabteen doorashooyinka Turkiga ee soo socdana waan u ducaynaynaaa” ayuu yiri Sheekh Nuur.
Ra,iisal wasaare ku xigeenka dowlada Turkiga oo isaguna ka hadlay goobta deeqda uu ku wareejinayay ayaa sheegay in mar walba ay garabtaaganyihiin shacabka Soomaaliyeed.
“Baaqii ra,iisal wasaaraha Turkiga ee ahaa in Soomaaliya dhinaca gar gaarka garab laga siiyo ayaan fulinaynaa walaalaheena Soomaaliyed waan garab taaganahay mar walba” sidaasi waxaa yiri R/wasaare ku xigeenka Turkiga.
Ra,iisal wasaare ku xigeenka Soomaaliya Eng, Mahdi Axmed Guuled oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba aysan iloobi doonin waxa ay u qabatay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda.
Wafdigii uu hoggaaminayay Ra,iisal wasaare ku xigeenka dowladda Turkiga ayaa ka duulay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Previous articleTaliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo la kulmay taliska booliiska Abu Dhabi
Next articleEng. Yarisow “Muhiimadda koowaad waxaan siinayaa taageeridda xornimo hadalka dalka Soomaaliya.”